तपाईंको छालाको लागि बेकिंग सोडाका फाइदाहरू - छाला
तपाईंको छालाको लागि बेकिंग सोडाको शीर्ष १० लाभहरू
बेकिंग सोडा एक रसोईघरको घटक हो जुन मिठाईहरू र अन्य स्वादिष्ट व्यवहारहरू गर्न प्रयोग गर्दछ। तर त्यसले सबै गर्दैन, हामी तपाईंलाई १० सौ कारणहरू दिन्छौं बेकिंग सोडा तपाईंको सौन्दर्य क्याबिनेटमा भण्डार गर्न किनकि यसले तपाईंको छालाको लागि चमत्कार गर्न सक्छ। तपाईंको खुट्टामा खुसी राख्न, र शरीरको गन्ध हटाउने देखि बिजुलीको दाग हटाउने सम्म, यहाँ बेकि s्ग सोडा हुनुपर्दछ घरेलु उपचार। हामी धेरै साझा गर्छौं छालाको लागि बेकिंग सोडाका फाइदाहरू र सहि तरीकाले यसलाई तपाईंको बृद्धि गर्न प्रयोग गर्नुहोस् सुन्दरता ।
१ चम्किलो छालाका लागि बेकिंग सोडाका फाइदाहरू
दुई बेन्सि S पिम्पल्सको लागि बेकिंग सोडा
3 उज्यालो गाढा स्थलहरूको लागि बेकिंग सोडा
चार ब्ल्याकहेड्स रोक्नको लागि बेकिंग सोडा
।। मृत छाला कक्षहरू हटाउनका लागि बेकिंग सोडा
। नरम, गुलाबी ओठको लागि बेकिंग सोडा
।। गाढा कोहनी र घुँडाको लागि बेकिंग सोडा
।। Incrown कपाल हटाउन को लागी बेकिंग सोडा
9 शरीर गन्ध हटाउन को लागी बेकिंग सोडा
१० नरम खुट्टा को लागी बेकिंग सोडा
एघार प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
चम्किलो छालाका लागि बेकिंग सोडाका फाइदाहरू
चम्किरहेको छाला स्वस्थ, युवा छालाको संकेत हो र प्राप्त गर्न सजिलो हुँदैन। जबसम्म तपाईं स्वस्थ खानुहुन्न, एक निर्दोष हुनुहोस् स्किनकेयर रुटीन र आठ घण्टा निद्रा पाउनुहोस्, तपाईंको छालामा चमक थप्न सजिलो छैन। यद्यपि, आवश्यक पोषक तत्वहरूले भरिएका प्राकृतिक सामग्रीहरू तपाईंको उद्धारमा आउन सक्छन्। हामी बेकिंग सोडा प्रयोग गर्नुहोस् र सुन्तलाको रस यो प्याक बनाउन र तिनीहरूको गुणहरूले छालाको कोलेजेन बढावा दिन र अशुद्धताहरू हटाउन मद्दत गर्दछ। सुन्तलाहरूले भरिएका छन् भिटामिन सी यसले तपाईंको छालामा प्राकृतिक चमक थप गर्दछ बेकिंग सोडाले मृतक छाला कोषहरूको तह हटाएर छाला बिस्तारै बाहिर निकाल्छ ।
ताजा सुन्तलाको रसको डबल मात्राको साथ एक चम्चा बेकिंग सोडा मिक्स गर्नुहोस्।
अब समान रूपमा आफ्नो अनुहार र घाँटी मा यो पेस्ट को पातलो तह लागू गर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यो गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो अनुहार धुनुभयो।
करीव १ 15 मिनेट को लागी सुक्नुहोस्।
भिजेको कपास प्याडको प्रयोग गरेर, यसलाई सफा गर्नुहोस् र कुनै पनि अवशेषहरू हटाउनको लागि चिसो पानी छप्काउनुहोस्।
हप्तामा एक पटक यो प्याक प्रयोग गर्नुहोस् सुस्तता हटाउन र तपाईंको छालामा अत्यावश्यक चमक थप्न।
बेन्सि S पिम्पल्सको लागि बेकिंग सोडा
हल्का exfoliating बेकिंग सोडाको गुणधर्म तपाइँको छालाबाट एक्ने र पिम्पल्स हटाउन मद्दत गर्न यसले एक अद्भुत घटक बनाउँदछ। पानीमा पातलो भएपछि यो अनुहारमा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ। बेकिंग सोडा मद्दत गर्दछ पिम्पललाई सुक्नुहोस् र यसको एन्टि-ब्याक्टेरियल सम्पत्तिले तपाईंको छालामा थप ब्रेकआउट्स रोक्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग छ भने सक्रिय एक्ने , यो उपाय प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् तर यदि तपाईंको छालाले प्रतिक्रिया देखायो भने, त्यसोभए प्रयोग बन्द गर्नुहोस्।
यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने:
एक चम्मच बेकिंग सोडा लिनुहोस् र पानीसँग त्यहि मात्रामा मिलाउनुहोस् जुन एउटा पेस्ट बनाउँदछ।
आफ्नो छालालाई फेस अनुहारबाट सफा गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई लागू गर्नुहोस् बेकिंग सोडा पेस्ट एक्ने मा
तपाईं यसलाई ब्ल्याकहेड्स र व्हाइटहेड्समा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यसलाई दुई-तीन मिनेटको लागि छोड्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो अनुहार नुनको पानीले धुनुहोस्।
यो तपाईंको pores खुल्छ देखि, हल्का एक रग आइस क्यूब तपाईंको अनुहारमा वा एउटा टोनर लागू गर्नुहोस् तिनीहरूलाई बन्द गर्न र तपाईंको छाला सुक्खा बनाउन।
यदि तपाइँको छाला केही सुक्खा छ भने, एक हल्का मॉइश्चराइजर प्रयोग गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यो नन-कमडोजेनिक हो जसको मतलब यसले तपाइँका छिद्रहरू रोक्दैन।
एक्नेको उपस्थितिमा देखिने कमी देख्न हप्तामा दुई पटक यो पेस्ट प्रयोग गर्नुहोस्।
उज्यालो गाढा स्थलहरूको लागि बेकिंग सोडा
छ दाग र दागहरू तपाईंको छालामा? बेकिंग सोडा तिनीहरूलाई बचाउन तपाईंको उद्धारमा आउन सक्छ। यो किनभने बेकि s सोडामा ब्लीचिंग गुणहरू हुन्छन् जसले छालामा दागहरू र दागहरू हराउन मद्दत गर्दछ। तर किनभने बेकिंग सोडा प्रयोग गर्दै जस्तो कि यो कठोर हुन सक्छ, हामी यसलाई छालाको लागि उपयुक्त बनाउन अर्को प्राकृतिक घटकसँग मिसाउँदछौं। यस अवस्थामा, हामी निम्बूको रस जोड्छौं जुन अर्को प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेन्ट हो।
एक कचौरामा, एक चम्चा बेकिंग सोडा थप्नुहोस् र त्यसमा आधा निम्बूको रस निचोरेर निकाल्नुहोस्।
दुईलाई मिक्स गर्नुहोस् बाक्लो पेस्ट प्राप्त गर्न। अब एक सफा र अलि अलिलो अनुहारमा, यो मिश्रण लागू गर्नुहोस्।
तपाईं पहिले blemishes र मार्क कभर गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी क्षेत्रहरूमा लागू गर्न बाँकी प्रयोग गर्नुहोस्।
यसलाई केही मिनेटसम्म छोड्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो धुलाई पहिले तातो पानीले धुनुहोस् र पछि चिसो स्प्लेशको साथ।
प्याट छाला सुक्खा र एक मॉइश्चराइजर SPF को साथ लागू गर्नुहोस्।
यसलाई रातमा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ किनभने निम्तीको रस प्रयोग गरे पछि घामले तपाईंको छालालाई कालो बनाउन सक्छ।
देखिने परिवर्तनहरू हेर्नका लागि हप्तामा एक वा दुई पटक यसको प्रयोग गर्नुहोस्।
ब्ल्याकहेड्स रोक्नको लागि बेकिंग सोडा
यदि तपाईंसँग छ भने तेल छाला , संभावनाहरू छन्, यो pimples र ब्ल्याकहेड्स को खतरामा छ जुन प्राय: तपाईंको अनुहारमा देखा पर्दछ। र यदि तपाईंसँग ठूलो पोर्स छ भने, यी समस्याहरूको घटना अझ बढी हुन्छ, अनुहार अशुद्ध देखिन्छ। बेकिंग सोडा मद्दत गर्न सक्छ तपाइँको छालाको प्वालहरू बन्द गरेर र देखा पर्नेमा उनीहरूलाई थोरै संकुचन गरेर यस मुद्दालाई न्यून गर्नुहोस्। यस घटकमा एस्ट्रिन्जेन्ट जस्तो गुणहरू छन् जसले छिद्र छिर्न बन्द गर्दछ र तिनीहरूलाई फोहोरसँग टाल्नबाट रोक्दछ जसले ब्ल्याकहेड्स र एक्नेलाई जन्म दिन्छ। यहाँ के गर्नु पर्दछ यहाँ छ।
एक चम्मच बेकिंग सोडा लिनुहोस् र यसलाई स्प्रे बोतलमा थप्नुहोस्।
अब यसलाई पानीले भर्नुहोस् र ती दुईलाई मिक्स गर्न यसलाई राम्रोसँग हल्लाउनुहोस्।
तपाईंको अनुहार क्लीन्जरले धुनुहोस् र तौलियाले सफा गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंको अनुहारमा समाधान स्प्रे गर्नुहोस् र यसलाई छोड्नुहोस् ताकि तपाईंको छालाले यसलाई भिजाउँदछ।
यसले pores बन्द गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं फ्रिजमा समाधान भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो अझ राम्रो काम गर्दछ।
यसलाई आफ्नो दैनिक सफा गर्ने भागको रूपमा बनाउनुहोस् छालाको समस्याबाट बच्न। तपाईं आफ्नो अनुहार न्युश्चराइजर यो प्राकृतिक टोनर प्रयोग पछि लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
मृत छाला कक्षहरू हटाउनका लागि बेकिंग सोडा
ग्रिम, फोहोर, प्रदूषण प्राय: हाम्रो छालामा बसोबास गर्दछ र हाम्रो नियमित अनुहार धुँदा सधैं आउँदैन। धुलोका यी साना कणहरू हटाउन, हामीलाई अधिक प्रभावकारी क्लीन्जर चाहिन्छ जसले प्वालहरू सफा गर्छ र यी अशुद्धताहरू हटाउँदछ। यस्तो अनुहारको समस्याको लागि अनुहार स्क्रब काम आउँदछ। बेकिंग सोडा छालालाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ जसले यी अशुद्धताको साथ मृत छाला कोषहरू हटाउँछ।
एक चम्मच बेकिंग सोडा र आधा चम्मच पानी लिनुहोस्।
विचार भनेको बाक्लो, ग्रेनाई पेस्ट बनाउनु हो ताकि यसले छालालाई एक्स्पोफिएट गर्न सक्दछ ताकि यो पानीसँग पातलो नहोस् भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
आफ्नो अनुहार धुने पछि, यस स्क्रबलाई गोलाकार गतिमा लागू गर्नुहोस्, आँखाको वरिपरि भएको क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक बेवास्ता गर्नुहोस्।
अब नियमित पानीले धुनुहोस् र त्यसपछि अनुहार सुक्नुहोस्।
छालालाई चिसो महसुस हुनबाट जोगाउन एक मोइश्चराइजर लगाउनुहोस्।
यो स्क्रब सुक्खा र संवेदनशील छालाका लागि उपयुक्त छैन तर तेलमा उत्तम काम गर्दछ संयोजन छाला प्रकार
तपाईंको छाला ताजा राख्नको लागि हप्तामा एक पटक यसको प्रयोग गर्नुहोस्।
नरम, गुलाबी ओठको लागि बेकिंग सोडा
धूम्रपान गर्ने, तपाईको ओठ चाट्ने र लामो समय बस्ने लिपस्टिक लगाउने जस्ता स्वास्थ्यकर बानीहरूले तपाईंको ओठलाई हानी गर्दछ र तिनीहरूको रंग अँध्यारो पार्दछ। हामी मध्ये धेरै जसो स्वाभाविक गुलाबी ओठहरू छन्, छायाँ परिवर्तन हुन्छ जब हामी तिनीहरूलाई पर्याप्त हेरचाह गर्दैनौं। सूर्य जोखिम यसको अर्को कारण हो गाढा ओठ । यदि तपाइँ तिनीहरूको प्राकृतिक रंग फिर्ता लिन चाहानुहुन्छ, बेकिंग सोडाले मद्दत गर्न सक्छ। हामी यसलाई महसँग मिसाउँदछौं ताकि यो नाजुक छालामा कठोर नहोस् र प्रक्रियामा यसलाई नमीलो बनाउँनुहोस्।
तपाईंलाई बराबर मात्राको आवश्यक छ बेकिंग सोडा र मह र किनकि यो ओठको लागि हो, तपाईंलाई एक चम्मच भन्दा बढि आवश्यक पर्दैन।
यदि तपाईंको ओठहरू पनि सुक्खा छन् भने, सोडा भन्दा बढी मह थप्नुहोस्।
दुईलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई ओठमा लागू गर्नुहोस्, सानो, गोलाकार गतिमा मलाथी।
यसले तिनीहरूलाई एक्स्फोलिएट गर्न र मृत छाला कोशिकाबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।
महले अशुद्धता हटाउनेछ र धेरै-आद्रता पनि थप्नेछ।
यस प्याकलाई केही मिनेटको लागि ओठमा बस्न दिनुहोस् अलि नरम पानीले हल्का रूपमा धुनुहोस्।
निवेदन गर्नु ओठ बाम प्रक्रिया पछि एसपीएफको साथ।
गाढा कोहनी र घुँडाको लागि बेकिंग सोडा
राम्रो छाला सौन्दर्यको मापन होईन, तर महिलाहरूको सुन्दर पनि प्रायः गाढा कुहिनो र घुडा हुन्छ। यदि छालाको र in्गमा यो फरक तपाईं परेशान गर्दछ, तपाईं यो प्याक को उपयोग गरेर यसलाई हल्का गर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रयोग गर्छौ बेकिंग सोडा र आलु को रस , दुबैमा प्राकृतिक ब्लीचिंग गुणहरू छन्। यी क्षेत्रहरूको अनुहारको भन्दा मोटो छाला भएकाले जो कोहीले यसलाई अधिक सुख्खा बिना सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछन्। तर हामी सिफारिस गर्दछौं कि एसपीएफको साथ दैनिक एक मोइश्चराइजर प्रयोग गरेर यी क्षेत्रहरू नरम राख्न।
एउटा सानो आलुको बोक्रा ताछ्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई बारीक पीस गर्नुहोस्।
यसको कचौरामा यसको रस निचोल्नुहोस् र त्यसपछि यसमा एक चम्मच बेकिंग सोडा थप्नुहोस्।
राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र त्यसपछि कपासको बल प्रयोग गरेर, यो समाधानलाई तपाईंको कुहिनो र घुडामा लागू गर्नुहोस्।
यसलाई १० मिनेटको लागि छोड्नुहोस् ताकि सामग्रीहरूले तिनीहरूको जादू चलाउन सकून्, र त्यसपछि पानीको मुनि धुनुहोस्।
अनुप्रयोग पछि एक moisturizing सनस्क्रीन लागू गर्नुहोस्।
यो उपचार हप्तामा एक वा दुई पटक प्रयोग गर्नुहोस् र चाँडै तपाईंको छाला छायाँ हल्का देखिन्छ।
तपाईं यो समाधान गाढा भित्री फिला र अन्डरआर्मसमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Incrown कपाल हटाउन को लागी बेकिंग सोडा
बढेको कपाल यो यस्तो खतरा हो कि यो छालामा हार्ड बम्प जस्तो देखिन्छ र ट्वीज नभएसम्म टाढा जान इन्कार गर्दछ। इन्ग्रोथ मूलत: कपाल भित्र भित्र कपाल बढ्दै जानुको सट्टा बाहिर पलाउनुको सट्टा हुन्छ जुन सामान्यबाट यसलाई छुटकारा पाउन गाह्रो बनाउँदछ। कपाल हटाउने विधिहरू जस्तै दाह्री र पाखुरा जबकि यो पूर्ण रूपमा ingrown कपाल को घटना रोक्न गाह्रो छ, तपाईं यसलाई बेकिंग सोडा र केही अन्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । अधिकतर, महिलाहरू जो बाक्लो कपालको बृद्धि वा तेल छालाको प्रकारको हुन्छन् भने बढ्दो कपालमा बढी खतरा हुन्छ।
पहिलो मसाज एरंडेल तेल तपाईंको छालामा जहाँ तपाईं कपाल बाक्दै हुनुहुन्छ।
एकचोटि छालाले तेल भिज्यो भने, ओसिने कपास प्याडको प्रयोग गरेर अधिक तरल हटाउनुहोस्।
अब बेकिंग सोडालाई आधा परिमाणको पानीसँग मिक्स गर्नुहोस् बाक्लो पेस्ट बनाउन।
यसलाई एक्स्फोलिएट गर्नका लागि प्रभावित क्षेत्रमा यो रब गर्नुहोस्। एक ट्वीजर प्रयोग गरेर, सजिलैसँग ईन्ग्राउन कपाल बाहिर निकाल्नुहोस्।
प्ोरहरू बन्द गर्न चिसो पानीमा भिजेको कटन प्याड प्रयोग गर्नुहोस्।
तेलले तपाइँको छाला सुक्खा र चिडिएको छैन भनेर पक्का गर्दछ, जबकि सोडा कपालबाट कपाल ढिलो गर्न मद्दत गर्दछ।
शरीर गन्ध हटाउन को लागी बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडामा धेरै गुणहरू छन् जसले यसलाई यस्तो अद्भुत घटक बनाउँदछ। यदि तपाईं कोही हुनुहुन्छ जसले धेरै पसीना बहाउनुहुन्छ र शरीर गन्धको मुद्दा छ भने, बेकिंग सोडा तपाईंको उद्धारमा आउन सक्छ । यो किनभने यो एक जीवाणुरोधी गुण हो कि गन्ध पैदा गर्ने ब्याक्टेरिया मार्दछ। बेकिंग सोडा पनि पसिना आवाश्यकता ओढ्दछ जब तपाईं पसीना र आफ्नो शरीर क्षारीय। यसले मात्र नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्दछ शरीरको गन्ध , तर पसीना पनि ल्याउँछ।
बेकिंग सोडाको एक चम्मच लिनुहोस् र यसलाई समान भागको ताजा-निचोने कागतीको रसको साथ मिलाउनुहोस्।
एकचोटि तपाईंसँग बाक्लो पेस्ट भएपछि यसलाई लागू गर्नुहोस् जहाँ तपाईं सबैभन्दा पसिना बहाउनुहुन्छ जस्तै अण्डरआर्मस, पछाडि, घाँटी, इत्यादि।
यो १ minutes मिनेट को लागी रहनुहोस् र त्यसपछि नुहाउनुहोस्। तपाईं यो स्प्रेसन बोतलमा भण्डारन गर्न सक्नुहुनेछ र नुहाउन अघि दिनको एक पटक यो spritz।
यो एक हप्ताको लागि गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई प्रत्येक वैकल्पिक दिनमा कम गर्नुहोस् जब तपाईं यसलाई काम गरिरहेको देख्नुहुन्छ।
नरम खुट्टा को लागी बेकिंग सोडा
हाम्रो खुट्टालाई केहि TLC चाहिन्छ तर हामी प्रायः उनीहरूलाई पुग्दैनौं। उनीहरूलाई सुन्दर र नरम महसुस गर्नका लागि हामीले उनीहरूको नियमित हेरचाह गर्नु पर्छ। यदि तपाईं एक सालुनमा विस्तृत पेडीक्योर सत्रहरूको लागि जान चाहनुहुन्न भने, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ बेकिंग सोडा कलस नरम गर्न र तपाइँको खुट्टाको दाग पनि सफा गर्दै। एक्सफोलिटि property सम्पत्तीले मृत छाला कोषहरू हटाउन र तपाईंको खुट्टा नरम गर्न मद्दत गर्दछ, जबकि यसको जीवाणुरोधी कार्यले खाडीमा संक्रमण राख्छ।
न्यानो पानीले आधा बाल्टिन भर्नुहोस् र यसमा तीन चम्चा बेकिंग सोडा थप्नुहोस्।
यसलाई विघटन हुन दिनुहोस् र त्यसपछि तपाईंको खुट्टालाई १० मिनेट को लागी समाधानमा राख्नुहोस्।
तपाईं पमिस ढु a्गालाई पछाडि राख्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो आत्माबाट मृत छाला निकाल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एकचोटि काम गरिसकेपछि, नियमित खुट्टाले तपाईंको खुट्टा धुनुहोस् र तिनीहरूलाई सुक्खा पखाल्नुहोस्।
त्यसोभए म्याश्चराइजिंग लोशन लागू गर्नुहोस् र मोजा लगाउनुहोस् ताकि तिनीहरू सुरक्षित रहन सक्दछन्।
यो कम्तिमा १ 15 दिनमा एक पटक गर्नुहोस् र तपाईंको खुट्टाले यसको लागि धन्यवाद दिन्छ।
Q. के पकाउने सोडा र बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जस्तै हो?
TO खाना पकाउने सोडा र बेकिंग सोडा उस्तै चीजहरू हुन्, मात्र नाम फरक हुन्छ, रासायनिक संरचना बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भन्दा फरक छ। पछिल्लो मजबूत छ किनकि यसमा उच्च pH छ, जसले बेकिंगको लागि प्रयोग गर्दा पिठोको बढ्दोतिर जान्छ। यदि तपाइँ बेकि s सोडासँग बेकिaking पाउडरको चम्मच प्रतिस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई आवश्यक नतिजाको लागि केवल १ / th थोरै चम्मच सोडा आवश्यक पर्दछ।
Q. बेकिंग सोडा को साइड इफेक्टहरु के छन्?
TO उपभोग को साइड इफेक्ट बेकिंग सोडा अधिक मा ग्यास समावेश छ , पेट फुल्ने र पेट दुखी पनि। सौन्दर्य उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्दा, यसलाई पातलो गरेर निर्देशन गरे अनुसार यसलाई प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ, ताकि यसको कठोरता कम हुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईको छालाको अवस्था छ भने, यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले तपाईको छाला विशेषज्ञसँग सल्लाह गर्नु उत्तम हुन्छ।
Q. कसरी पकाउने सोडा फेस मास्क बनाउन?
TO हामीले धेरै सूचीबद्ध गरेका छौं बेकिंग सोडा प्रयोग गर्ने तरिकाहरू माथिको, तर अर्को साधारण अनुहारको मास्क जुन तपाईं यो घटक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई दूधसँग मिसाएर हो। एक चम्मच बेकिंग सोडा र एक चम्मच दूध लिनुहोस् र तिनीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। तपाईं एक बहाव तरल हुनेछ। यसलाई तपाईंको अनुहारमा समान रूपमा लागू गर्नुहोस् र यसलाई नुनको पानीले धुने अघि १० मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। यस पछि मॉश्चराइजिंग सनस्क्रीन लागू गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईं आफ्नो अनुहारबाट फोहोर हटाउन हप्ताको एक पटक यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Q. के बेकिंग सोडा संवेदनशील छालाको लागि ठीक छ?
TO संवेदनशील छाला यसको संरचनाको कारण अधिक छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ। बेकिंग सोडा यस छालाको प्रकारको लागि अलि कठोर हुन सक्छ। यदि तपाईंसँग संवेदनशील छाला छ भने, तपाईंले बेकि s सोडा समावेश गरी कुनै अनुहार प्याक लागू गर्नु अघि तपाईंले आफ्नो पाखुरामा प्याच टेस्ट गर्नु पर्छ। यदि कुनै जलन वा लालिमा छैन भने, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो हप्तामा एक पटक उत्तम हो एक पटक प्रयोग नगर्नुहोस्।
तपाईं पनि पढ्न चाहानु सक्नुहुन्छ5बेकि s सोडा प्रयोग गरी खेल परिवर्तन गर्ने ब्यूटी ह्याक्स
पेटको आकार कसरी कम गर्ने
चित्रहरु को साथ पेट को बोसो जलाउने व्यायाम
घरमा सजिलो स्न्याक्स
कसरी स्पाम रोक्न
नेटफ्लिक्स मा उत्तम अपराध वृत्तचित्र
कपालको विकासका लागि बदामको तेलले फाइदा पुर्‍याउँछ